Xasan waa wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo yimid Jarmalka sanadkii 2015. Ka dib markii uu ka soo shaqeeyay Koonfur Afrika dhowr sano, saaxiibbadiisa guriga ayuu ka dhaadhiciyay inay isku dayaan inay galaan Yurub halkii ay ku noqon lahaayeen koonfurta. Markii hore, wuxuu iska caabiyey isagoo ku saleynaya sheekooyinka naxdinta leh ee uu ka maqlay waddada Sahara. Laakiin asxaabtiisu way ku qosleen, su’aal gelisay geesinimadiisa ugu dambayntiina waxay ku qanciyeen inuu isku dayo.
Wixii uu soo maray intii uu safarka ku marayay Liibiya iyo Badda Mediterranean-ka waxa uu xaqiijiyay cabsidiisa ugu xun. Wuxuu goobjoog ka ahaa rabshado arxan-darro ah oo ay gaysteen ganacsatada; wuxuu arkay dad la garaacayo oo looga tagey inay cidlada ku dhintaan. Liibiya, isaga iyo dadkii ee la socday waxay afduubteen niman tahriibiyayaal ah kuwaas oo ku hayey xero ay ku dalbanayeen madaxfurasho siideyntooda.
“Qof uun hadduu ka hadlo wax ka dhan ah, waa la garaacay ka dibna lagu tuuray balli biyo qabow ah. Waxay ku qasbeen dadka inay gacmahooda derbiga dul dhigaan oo garaacaan; Waxay ka dhigeen dad dhulka jiifay oo lugaha iyo qoorta garaaceen. Haddii aad xannuunsato, keligaa baad ahayd. ”
Dadku waxay si joogto ah u yimaadaan xarunta dadka ka ganacsada, qaar badan oo xaalad naxdin leh, iyo xaalad daciif ah. Hal koox oo ka kooban 20 ayaa lagu haystay laba toddobaad cidlada bilaa cunto la'aan ah. Shan ka mid ah way dhinteen. Xasan wuxuu goob joog u ahaa geerida dad kale oo badan oo xabsiga lagu hayey rabshado iyo cakiran darteed. Qaar aan bixin karin sii-dayntooda si isdaba joog ah ayaa loo dilay; inta badan kuwa aan bixin karin waxaa lagu qasbay inay u shaqeeyaan tahriibiyeyaasha ilaa ay ka daboolayaan "deynkooda".
Ka gudbida Badda Mediterranean-ka waxay ahayd waayo-aragnimo kale oo guurka. Xeebta, isaga iyo rakaabkii la socday ayaa si cabsi leh uga falceliyay baaxadda doonida wayna diideen inay raacaan. Waxaa ku qasbay doonyaha yar yar tahriibiyeyaasha oo ku hanjabay inay dili doonaan qof kasta oo dhulka jooga. Doonta ayaa si weyn culeyskeeda waxaa saarneyd 105 qof. Badda dhexdeeda, markii ay soo dhawaadeen markab badbaadinta Talyaaniga, ayaa doontii ay degtay, iyo 50 rakaab ah ayaa ku qaraqmay.
Hada Jarmalka, Xasan waxaa dhiiba xusuusta iyo dhaawacyada marinkiisa. Wuxuu ka qoomameynayaa aaminsanaantiisii ballanqaadyada asxaabta ee safar sahlan; wuxuuna si gaar ah ugu naxaay "sheekooyinka ‘ dadka Yurub ku qoraan warbaahinta bulshada, iyagoo ku sifeeya noloshooda" riyooyin rumow. " Boostada noocan oo kale ah waa mid dilaa ah tan iyo markii ay dadka ka dhaadhiciyaan inay noloshooda iyo xorriyadooda qatar geliyaan dariiqa socdaalka aan caadiga ahayn ee halista ah ee maraya Liibiya iyo Badda Mediterranean-ka.
“Qurba-joogga reer Yurub ee sawir qaada oo dhahaya waxaan leenahay guri iyo baabuur waxaanan ku nool nahay nolol raaxo leh; kuwanu waa been oo dadka dhammaan bay khiyaanayn.”